यता यस्तो छ किसानको कहर, भान्सा भने भारत कै भर ! - Aarthiknews
यता यस्तो छ किसानको कहर, भान्सा भने भारत कै भर !
काठमाडौं । नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमा सुकिरहेको छ, सडिरहेको छ । तर, भारतबाट निर्वाध आएको तरकारी सीधै भान्सामा पुगिरहेको छ ।
नेपाली किसानको उत्पादन उठाउन नमान्ने बिचौलिया व्यापारीले फोनकै भरमा भारतबाट तरकारी मगाएर नाफा कमाइरहेका छन् । नेपाली किसानको पसिना खेतमै सुक्दा सरकार मूकदर्शक छ ।
लकडाउन सुरु भएपछि नेपालगन्जमा भारतबाट पाँच करोडको तरकारी आयात भएको छ । तर, व्यापारीले स्थानीय किसानको तरकारी उठाउन मानेका छैनन् ।
त्यसैले किसानको तरकारी खेतमै सुकेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगर–१६ जयसपुरका मुनिर अहमद राहिनको करिब पाँच सय क्विन्टल बन्दागोभीमध्ये ८० प्रतिशत कुहिएर नष्ट भइसकेको छ ।
लकडाउनका कारण सहरी क्षेत्रमा तरकारीको उपभोग करिब ५० प्रतिशतसम्म घटेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्रै उत्पादित तरकारीले उपभोक्ताको माग धान्नुपर्ने हो । सामान्य अवस्थामा हुने तरकारी खपतमा स्वदेशी र आयातीत तरकारीको हिस्सा आधा–आधा हुन्छ ।
तर, अहिले तरकारीको उपभोग घटे पनि आयात घटेको छैन, मागको सबैजसो हिस्सा आयातीत तरकारीले कब्जा गरेपछि स्वदेशी किसान आफ्नै तरकारीबारीमा डोजर चलाउन बाध्य बनेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा अर्थात् चैत मसान्तसम्म मुलुकमा कुल २३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भएको छ । त्यसअघि फागुनसम्ममा २० अर्ब ५८ करोड १३ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेका अनुसार आलु र प्याजमा मुलुक परनिर्भर छ ।
अहिले पनि सहरी मागको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी आलु र प्याज भारतबाट आयात भइरहेको छ । ३ देखि ५ प्रतिशत प्याज चीनबाट र सोही परिमाणको आलु भुटानबाट आयात हुने गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
राष्ट्रसेवकको पोशाक र जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन गरिने